I-Zucchini ifakwe i-tuna ngeeshizi | Ukupheka kweKhitshi
UMaria vazquez | 30/05/2021 10:00 | Iiresiphi ezilula
Namhlanje ndiyakukhuthaza ukuba ulungiselele iresiphi esihlala siyisebenzisa ekhaya ukugqibezela isidlo sangokuhlwa: i-zucchini ifakwe i-tuna kunye netshizi. I-zucchini enezinto eziluncedo kakhulu, ilula kwaye iyakhawuleza. Kwaye ukupheka inyama yezi kwi-microwave akuthathi ngaphezulu kwemizuzu emi-4.
Kwimicrowave? Phambi kokuba siyenze eontini, kodwa ukusukela oko sifumene ukuxhoma kwemicrowave, sihlandlo ngasinye siyakhuthazwa ukuba sipheke ngakumbi ngesi sixhobo. Ikwayindlela ekhawulezayo yokwenza. Nangona ungangxamanga; Baphuma kubushushu obuphezulu ke kuya kufuneka ulinde imizuzu embalwa ukukhupha inyama ngaphandle kokuzitshisa.
Nje ukuba i-zucchini ichithwe ungazigcwalisa ezininzi indibaniselwano yezithako ezishushu nezibandayo. Ngeli xesha sibheje ngokudibanisa i-zucchini kunye netswele, ityhuna, itumato kunye netshizi. Ngaba ucinga ukuba yindibaniselwano yeshumi? I-gratin yokugqibela kwaye baya kuba bekulungele ukukhonza.
Ezi Zucchini zohlobo lweTyesy Stuffed ziyindlela efanelekileyo yokutya. Ilula kwaye iyakhawuleza ukuzilungiselela, ndiqinisekile ukuba uza kuziphinda.
Iikeni ezimbini zetyhuna yendalo
Sihlamba i-zucchini kakuhle, sizinqumle ngesiqingatha ubude kwaye siziphathe microwave kumandla aphezulu zide zithambe; malunga nemizuzu emi-4. Emva koko, siyayisusa ehovini kwaye siyivumele iphumle imizuzu embalwa ngaphambi kokuba isuse inyama ngecephe.
Ngelixa i-zucchini ipheka, usike itswele lisikwe kakuhle Qhotsa ngepani yokuthanjiswa nge oli.
Xa itswele lithambile, yongeza inyama ye-zucchini, itumato kunye netyhuna, isizini kwaye upheke yonke imizuzu embalwa.
Ekugqibeleni, Sigcwalisa i-zucchini ngomxube, sidibanisa itshizi ngaphezulu kunye negratin de itshizi inyibilike.
Sikhonza i-zucchini efakwe ityhuna netshizi, ishushu
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Iiresiphi ezikhethekileyo » Iiresiphi ezilula » I-Zucchini ifakwe i-tuna ngeeshizi
Imicroowaved carrot buds